मतदान सकियो, मतगणना ११ दिनपछि मात्र, कहाँ राखिन्छ मतपेटिका र अब के-के गरिन्छ? :: PahiloPost
मतदान सकियो, मतगणना ११ दिनपछि मात्र, कहाँ राखिन्छ मतपेटिका र अब के-के गरिन्छ?
काठमाडौँ : पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत ३२ जिल्लामा साँझ ५ बजे मतदान सकिएको छ। मतदान सकिए पनि मतगणना भने तत्काल गरिने छैन। दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत बाँकी जिल्लाहरुमा मतदान सकिएपछि मात्रै सबै जिल्लाको एक साथ मतगणना सुरु हुनेछ।
झ्यालढोकामा चुकुल लगाई लाहाछाप लगाउने
कसरी हुन्छ मतगणना?
कुनै मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदानको कार्य समाप्त नभएसम्म  प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्धारित सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको तथा त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मतगणना प्रारम्भ गरिने छैन।
मतदान सकियो, मतगणना ११ दिनपछि मात्र, कहाँ राखिन्छ मतपेटिका र अब के-के गरिन्छ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।